SUPER सुपर सजिलो र सुपर फन तरिकाहरू पुरानो लेहेंगाको पुन: प्रयोग गर्नका लागि # DIYTRICKS - PAMPEREDPEOPLENY.COM - फेसन
Super सुपर सजिलो र सुपर फन तरिकाहरू पुरानो Lehengas #DIYTricks पुनः प्रयोग गर्नुहोस्
घर फेसन प्रचलनहरू फेसन ट्रेंड्स कौस्तुभा द्वारा कौस्तुभा शर्मा | जुलाई १, २०१। मा
के तपाई प्रत्येक रिसेप्शनमा उही लेहेंगा लगाउन नसक्नु भएको छ? यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने त्यहाँ त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छैनन् जुन तपाईंलाई विवाहको मौसममा नयाँ किन्न दिनुहोस्। यहाँसम्म कि सरल lehenga कम्तिमा grand भव्य खर्च हुनेछ।
यदि त्यहाँ यी पुरानो लेहेंगा पुनःप्रयोग गर्न कुनै तरिका थियो भने? यो महान हुनेछ? ठिक छ, हामी यो विचार गर्दछौं कि यो एक लेन्ंगाको पैसा खर्च गर्नु भन्दा राम्रो छ, यसलाई केही समयको लागि लगाउनुहोस् र त्यसपछि यसलाई दिनुहोस्।
कति बखत मैले प्रसूति बेल्ट लगाउनु पर्छ?
यसले हाम्रो मनलाई भंग पार्छ कि केहि त्यस्तो सुन्दर कुरा जुन हरेक दिन लगाउन सकिदैन। साँच्चिकै मन पर्छ? त्यसोभए तपाईले यसलाई दिनदिनै के लगाउन सक्नुहुन्न, तपाई निश्चित रूपमा यसलाई धेरै चोटि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईंले यो पढिसकेपछि, तपाईले अहिले सोचेको भन्दा बढि।
यस टुक्रा मा, हामी तपाइँलाई तपाइँको पुरानो lehengas प्रयोग गर्न र नयाँ केहि राम्रो र राम्रो बनाउन को लागी DIY DIY सुझाव प्रदान गर्दछौं।
तिनीहरूलाई अनारकलिसमा बदल्नुहोस्
तपाइँको पुरानो लेहेंगालाई सिलाई गरिएको अनारकलिसमा बदल्नुहोस्। उत्तम विकल्प जब तपाईंसँग पहिले नै १० पटक भन्दा बढि लेहेंगा हुन्छ।
यसलाई साडी शैलीमा बदल्नुहोस्
साडी शैलीमा तपाईंको पुरानो लेहेंगा लगाउनुहोस्। यो यस्तो देखिन्छ कि तपाईंले साडी लगाउनु भएको छ तर लेहेन्गा भन्दा। तपाइँको नियमित शैली विस्तार गर्नुहोस्।
कुर्तिसमा लेहेंगा डुप्ट्टा खोल्नुहोस्
तपाइँको लेहंगा डुप्‍टासलाई सेक्सी कुर्तिहरूमा बदल्नुहोस्। तपाईं तिनीहरूलाई मा विवाह को समयमा महत्त्वपूर्ण नभएको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा लगाउन सक्नुहुन्छ।
लुगा लगाई डुप्ट्टा लगाउनुहोस्
इंडो-वेस्टर्नको लागि जान चाहानुहुन्छ? पूर्ण-लम्बाईको पोशाक प्राप्त गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको भारी लेहेन्गा डुप्ट्टाको साथ लगाउनुहोस्।
कसरी तपाइँको ओठलाई प्राकृतिक रूपमा गुलाबी बनाउने
मिक्स गर्नुहोस् र Lehengas मिलान गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग न्यूनतम le लेहेंगा छन् भने तपाईं तिनीहरूको विपरित रूपमा पूरै लगाउन सक्नुहुन्छ। एउटाबाट हल्का टोन्ड चोली लिनुहोस्, अर्कोबाट गाढा छायाको लेहेंगा स्कर्ट लिनुहोस्।
ठोस र Color्ग ब्लाउज थप्नुहोस्
यदि तपाइँको लेहेंगा सेट भारी कढ़ाई छ। ब्लाउज छोड्नुहोस्। एक साधारण सादा, प्राथमिकतामा मखमल, ब्लाउज प्राप्त गर्नुहोस् र यसलाई बाँकी टुक्राहरू स्कर्ट र डुप्ट्टासँग लगाउनुहोस्। एक नयाँ लेहेंगा तुरून्त!
यो मैक्सी कुर्तासँग लगाउनुहोस्
तपाईंको डुप्ट्टा र ब्लाउज ड्रप गर्नुहोस्। तपाईंको भारी कढ़ाई लेहेंगा स्कर्टको लागि बनेको एक मक्सी कुर्ता पाउनुहोस्।
कसरी बगल बोसो को बाट छुटकारा पाउन
भाग्य रेखा चन्द्रमाको पर्वतबाट
गर्भावस्थामा एसिडिटीको लागि घरेलु उपचार
ढिलो गति रोक्नको लागि घरेलु उपचार
कसरी जन्म मिति द्वारा भाग्यशाली रंग पाउन
ग्यासको कारण छाती दुखाइको लागि औषधि